Warar ku saabsan iPhone | Warka IPhone (Bogga 24)
Haddii aad wax shaki ah ka qabtid haddii Jailbreak uu gaabinayo iPhone-kaaga, fiidiyowgaan ayaa xaqiijin doona.
IOS 9.1 xiriiriyeyaasha soo dejinta
Qor meesha aad ka heli karto xiriiriyeyaasha soo dejinta ee macruufka 9.1
Waze 4.0 waxaa lagu cusbooneysiiyay warar aad u xiiso badan
Waze 4.0 GPS Navigator ayaa lagu cusbooneysiiyay nidaam cusub oo isdhexgal ah sidoo kale hadda wuxuu isticmaalaa batteri yar.
Filimka cusub ee Steve Jobs ayaa soo xareeyay $ 2,2 milyan
Toddobaadkii hore dhammaadkiisii, halkaasoo filimkii ugu dambeeyay ee Shaqooyinka mar kale laga daawaday, wuxuu soo xareeyay $ 1,5 milyan.
Apple waxay cusbooneysiisaa qolka iWork ee iOS 9 iyo 3D Touch
Apple waxay go'aansatay inay cusbooneysiiso dhamaan qolkeeda iWork si ay u bixiso taageero howlaha badan ee iOS 9 iyo 3D Touch.
Apple wuxuu cusbooneysiiyaa Bluetooth-ka IPhone 6, 6 Plus iyo iPad Air 2
Sida laga soo xigtay websaydhka Apple, labada nooc ee iPad Air 2 iyo iPhone 6 iyo iPhone 6 Plus ayaa cusboonaysiiyay nooca Bluetooth-ka oo ay ka dhigeen 4.2.
Apple waxay ansaxineysaa xayeysiiyaha xayeysiinta ee la shaqeeya iOS 9 wuxuuna xiraa waxyaabaha ku jira barnaamijyada hooyo.
Codsigu wuxuu ujeedkiisu yahay inuu xannibo xayeysiinta ma aha oo keliya barnaamijyada moobiilka, laakiin sidoo kale barnaamijyada moobiilka ee waddanka u dhashay, oo ay ku jiraan Facebook iyo xitaa barnaamijka Apple News laftiisa.
WhatsApp waxaa lagu cusbooneysiiyay sheeko cusub oo aan faa'iido lahayn
Codsiga farriinta WhatsApp wuxuu cusbooneysiiyay codsigiisa macruufka isagoo soo bandhigaya suurtagalnimada calaamadeynta farriimaha sida xiddigta leh.
Philips wuxuu ku dhawaaqayaa nalalka cusub ee Hue iyo iswaafajinta AppleK HomeKit.
Hue Bridge 2.0 waxay awood u leedahay inay la shaqeyso Apple's Homekit, iyadoo u oggolaanaysa dhammaan nalalka Hue ee jira in lagu xakameeyo amarrada codka Siri.
Apple TV-ga cusubi wuxuu oggol yahay oo keliya laba aaladood oo Bluetooth ah markiiba.
Apple TV-ga cusub wuxuu taageeri doonaa oo keliya laba kantaroola Bluetooth markasta iyo seddex, oo ay kujirto kantaroolka Apple TV, wadar ahaan aaladaha.
Falanqeeyayaashu waxay filayaan iPhone 'raqiis ah' sanadka 2016
Weli falanqeeyayaasha qaar ayaa wali ku adkeysanaya iPhone la awoodi karo in kasta oo ay ku dhacday iPhone 5c.
OS X El Capitan hadda waa la heli karaa: Sida loo soo Dejisto iyo Macs u dhigma
Xiriirinta soo dejinta OS X El Capitan
Google waxay soo bandhigtay Nexus 5X iyo 6P cusub, Chromecast 2 iyo Chromecast Audio oo ay weheliso kiniin cusub oo la yiraahdo Pixel C.
Tilmaamaha cusub ee iOS 9 keenayo
Apple wuxuu soo bandhigayaa tilmaamo cusub nooc kasta oo ka mid ah nidaamkiisa hawlgalka. Halkan waxaan ku sharxi doonnaa waa maxay tilmaamaha cusub ee lagu soo bandhigay iOS 9.
Jiilka 2aad ee cusub ee TouchID sidoo kale wuxuu ogaadaa faraha qoyan
Jiilka labaad ee Aqoonsiga Taabashadu ma aha oo kaliya mid dhakhso badan laakiin sidoo kale wuxuu ogaan doonaa faraheena qoyan.
Isbarbardhigga xawaaraha u dhexeeya dhammaan taleefannada iPhone-ka ah [VIDEO]
Fiidiyowgaan xiisaha leh waxaan awoodi doonnaa inaan ku qanacno farqiga u dhexeeya dhammaan iPhone-ka tan iyo markii la bilaabay 8 sano ka hor.
IPhone-yada cusubi waxay soconayaan ilaa 1 saac oo biyaha hoostooda ah!
IPhoneka cusub ee 6s iyo 6s Plus ayaa wanaajinaya u adkaysigooda biyaha si la yaab leh, isagoo ka mid ah kuwa ugu adkaysiga badan cabitaannada iyada oo aan lagu aqoonsan IPX
2GB-ka RAM-ka ah ma laga ogaan karaa iPhone 6s-ka cusub?
Waxaan ku tusineynaa fiidiyoow aad ku arki karto faraqa u dhexeeya iPhone 6 Plus oo leh 1 GB oo RAM ah iyo kan cusub ee iPhone 6s Plus oo leh 2 GB oo RAM ah
Netflix oo loogu talagalay macruufka waa la cusbooneysiiyay taas oo u oggolaanaysa iibsashada rukunka barnaamijka
Netflix waxay cusbooneysiisaa barnaamijkeeda si ay noogu oggolaato inaan si toos ah uga iibsanno rukunka adeegga barnaamijka shirkadda.
Soo ogow hab cusub oo aad ku jabsato wax ku iibsashada barnaamijka ka shaqeeya xitaa iOS 9
iMazing ayaa si kama 'ah u ogaanaya hab lagu "khawano" ku-iibsiga barnaamijka ee barnaamijyada qaarkood sida Birds Birds 2 oo xitaa ka shaqeeya iOS 9.
Dhagax dixeed ayaa soo saaray saacad cusub oo nashqadeysan oo wareegsan: Wareegga Xilliga Dhagaxleyda
Dhagax dixeedku wuxuu bilaabayaa Wareega Waqtiga Dhagaxa
Horumar sameeye wuxuu xaraashaa AppleTV 4 eBay, isagoo ka faa'iideysanaya daldalool sharci ah
Soo-saare ayaa ka faa'iideysanaya dalool ku jira qodobbada Apple si uu uga iibiyo AppleTV 4 (oo la helay ka hor intaan la iibin) eBay si loo helo shax wanaagsan.
Apple waxay aqoonsan tahay cilad leh Sawirro Live ah oo ay ku hagaajin doonto cusbooneysiinta barnaamijka
Baabuurka Apple wuu jiraa waana kuwan dhammaan tijaabooyinka aan hayno ilaa maanta
Apple waxay isku diyaarineysaa inay bilawdo tijaabinta gawaarideeda wadooyinka California
Miyaan ku heli doonaa macruufka 9 iyada oo loo marayo OTA haddii aan ku rakibo nooca beta ama GM?
Haddii aad hadda hayso nooc ka mid ah noocyada kala duwan ee macruufka 9 ee Apple ay billowday bishii Juun ee la rakibay, barnaamijka iPad News waxaan kuu sheegaynaa sida loo cusbooneysiiyo qalabkaaga.
Barnaamijka macruufka ee MEGA wuxuu helayaa cusbooneysiin weyn
Nooca cusub ee barnaamijka MEGA ee loogu talagalay macruufka waxaa ku jira nooc u gaar ah oo loogu talagalay iPad.
Ciyaartoyda IOS iyo Android waxay kuwada jiri doonaan Minecraft
Nooca ugu dambeeyay ee Minecraft: Pocket Edition wuxuu u oggolaanayaa macruufka, Android iyo Windows 10 Isticmaalayaasha Mobile inay ku ciyaaraan isla madal.
Haddii aad qorsheyneyso inaad wax ku duubto 4K, iska ilow 6GB iPhone 16s
Habka soo gelinta iPhone-ka ayaa si cad ugu filnayn duubista 4K, waxaan kuu sheegi doonaa inta ay duubista fiidiyowga ah ee 4K ay ku jirto iPhone-ka.
Hage u adeegsiga iPhone-ka sidii modem PC ah
Tutorial si aad ula wadaagto internetka adoo adeegsanaya iPhone router ahaan. Soo ogow sida loo dhex maro adoo adeegsanaya taleefankaaga gacanta mahadnaqid tether.
Waxaan ogaanay sheeko cusub oo aysan Apple sheegin, iPhone 6s cusub ayaa 2 microphone hoose ku leh, ma ogaan doonnaa faa iidada labaad?
Apple waxay xaqiijineysaa in iPhone 6S uu leeyahay batteri yar
Batariga iPhone 6S waxaa loo yareeyay 1715 mAh, ku dhowaad 100 mAh wuxuu ka yaryahay kii kahoreeyay, iPhone 6 batari.
Phillips wuxuu bilaabay qalab aad u ifaya Hue Lightstrip Plus
Phillips wuxuu bilaabayaa Hue Lightstrips Plus cusub si loo kordhiyo awooda nidaamkiisa nalka casriga ah.
PayPal waxay hada bilowday nooc cusub oo lacag bixin ah si ay lacag ugu dirto saaxiibadeena iyagoon bixin guddiyada
GoPro waxay cusbooneysiisaa barnaamijka xakamaynta kamaradda si ay noo oggolaato inaan wax ka beddelno fiidiyowyada aan ka duubno barnaamijka laftiisa.
Samsung waxay ku siineysaa $ 200 haddii aad ka wareejiso Apple
Istaraatiijiyaddii ugu dambeysay ee Samsung waxay ku siineysaa illaa $ 200 haddii aad go'aansato inaad tufaaxaaga ugu beddesho Samsung Galaxy.
"Pengate" waa waxa loogu yeeray qaladka weyn ee naqshadaynta ee ka dhigaya Galaxy Note V mid aan waxtar lahayn haddii aad S-Pen dusha ka geliso.
Apple waxay shaqaaleyn kartaa "YouTubers" caan ah si ay uga shaqeyso xayeysiinteeda
Shirkaddu waxay shaqaaleysiin kartaa qaar ka mid ah YouTubers caan ah ololaheeda xayeysiinta ee soo socda.
Beddelka Cydia, iMods, wuxuu durbaba ku jiraa wajigiisii ​​ugu dambeeyay dhawaana waxaan awoodi doonnaa inaan ku raaxeysano dukaanka dalabka cusub ee doonaya inuu beddelo Cydia
Shabakadda WhatsApp ee loogu talagalay iPhone ayaa hadda heli kara dhammaan adeegsadayaasha
Saacadaha soo socda, WhatsApp ayaa cusbooneysiin doonta codsigeeda iyadoo adeegsadayaasha iOS ay ugu dambeyn awoodi doonaan inay ka isticmaalaan kumbuyuutarka shabakadda WhatsApp
Samsung Gear S2, Nuqulkii ugu dambeeyay ee Samsung ilaa Apple
Saacadda cusub ee ka socota shirkadda Kuuriya waxay u egtahay mid u eg Apple Watch marka loo eego is-dhexgalka isticmaalaha.
Waxaan ku baraynaa sida loo soo dejisto khariidadaha iPhone-ka oo leh Halkan Maps-ka Nokia, sidaa darteed waxaad yeelan doontaa khariidado qadla'aan ah adigoon ku xirneyn xogta ama 3G.
Google ee macruufka waa la cusbooneysiiyaa iyadoo la hagaajinayo shaqada Ok Google
Google waxay cusbooneysiisaa barnaamijkeeda mashiinka raadinta hagaajinta hawlgalka kaaliyaha Ok Google.
Sannadkan iPhone 6c ayaa la soo bandhigi karaa iyadoo ay weheliyaan iPhone 6s iyo iPhone 6s Plus
Sida laga soo xigtay evleaks, sanadkan iPhone 6c ayaa la soo bandhigi doonaa iyada oo ay weheliyaan iPhone 6s Plus iyo iPhone 6s. Waxaan xasuusnaa in evleaks ay xadeen aalado badan
Khariidadaha Google ee loogu talagalay macruufka ayaa soo bandhigaya habeyn cusub
Khariidadaha Google ee loogu talagalay macruufka wuxuu soo bandhigayaa hab cusub oo habeenkii ah oo ku saabsan nidaamkiisa GPS navigation kaas oo noo oggolaan doona inaan u isticmaalno codsiga si raaxo leh
Tani waa fikradeena ku saabsan iOS 9 Beta 5
Waxaan qabannaa dib u eegis kooban oo ku saabsan wararka ku saabsan iOS 9 iyo fikrad ku saabsan waxa macruufka 9 noqonaayo oo aan ku xirneyn meesha aan ku suganahay.
WhatsApp waxay heshaa cusbooneysiin weyn, kuwani waa warka
Codsiga farriinta deg dega ah ee caanka ah ayaa hada soo maray mid ka mid ah cusbooneysiintii ugu weyneyd ee lagu yaqaanay, kuwani waa wararka.
Ayaa ogaa in iphone uu awoodi doono inuu intaas ku dheeraado moolka? Xitaa milkiilihiisu kuma kalsoona inuu markale helo.
Sannad kadib markii shanlada loo helay muuqaal ahaan, wali lama heli karo maanta waxayna umuuqataa inaysan dhaqso noqon doonin.
Moodooyinka Volkswagen ee 2016 ayaa soo bandhigi doona CarPlay
Volkswagen waxay xaqiijineysaa in 2016 Golf R iyo Tiguan ay ku dari doonaan taageerada CarPlay gawaaridooda.
Laga bilaabo maanta Windows 10 waa mid rasmi ah qodobkaanna waxaan kaaga sheekeyn doonaa waxyaabo badan oo ku saabsan nidaamka cusub ee hawlgalka ee Microsoft.
Steve Jobs: Mashiinka Man, oo ah dukumiinti aad loo dhaleeceeyay
Tilmaamihii ugu horreeyay ee rasmi ah ee dokumenteriga ah "Steve Jobs: Man Machine", oo ku saabsan dhinaca mugdiga ah ee Steve Jobs, ayaa la daabacay.
Logi BLOK waa kiiska ugu dambeeya iPad-kaaga
Kiiskan cusub ee iPad-ka ee laga keenay Logitech waxaad iPad-gaaga u rogi doontaa wax aad ugu eg oogada Microsoft.
Iska jir khayaanada ka dhex muuqata Safari
Khiyaano iska dhigaysa taageerada Apple ayaa isku dayi doonta inay xado macluumaadkeena shaqsiyadeed. Waxaan sharaxeynaa sida looga fogaado.
Nintendo ayaa si dhuumaaleysi ah ugu soo galay AppStore
Balloon Fight, oo ah mid caan ah oo loo yaqaan 'Nintendo', ayaa si dhuumaaleysi ah ugu soo gala AppStore qaab ah barnaamij ay soo saareen dhinacyo saddexaad, oo lacag la'aan ah isla markaana aan lahayn xayeysiin.
Sida loogu daro qodobbada jeebka ka dib cusbooneysiintii ugu dambeysay ee Twitter
Waxaan si faahfaahsan u qeexnay, talaabo talaabo ah, sida loogu daro xiriiriye jeebka qalabka cusub ee Twitter
Apple ayaa bilawday ololeheeda cusub ee xayeysiiska iPhone ee cinwaan looga dhigay: "Haddii uusan ahayn iPhone, ma aha iPhone"
OdysseusOTA waxay kuu ogolaaneysaa inaad hoos u dhigto macruufka 6.1.3
Qalabkani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku laabato macruufka 6.1.3 nooc kasta oo iOS ah, illaa intaad haysatid iPhone 4S ama iPad 2.
iTunes Match wuxuu noo ogolaan doonaa inaan keydinno 100.000 oo heeso waxaana lagu dari doonaa Apple Music
Isticmaalayaasha Apple Music waxay heli doonaan iTunes Match iyada oo aan kharash dheeraad ah ku bixin
Habka badbaadinta baytariga ee iOS 9 wuxuu yareeyaa awoodda iPad
Tijaabooyinkii ugu dambeeyay waxay xaqiijinayaan in habka keydinta batteriga ee iOS 9 uu yareeyo waxqabadka processor ilaa 40%.
Facebook Messenger ayaa hada cusbooneysiisay cusbooneysiin cusub oo kuu ogolaaneysa inaad isticmaasho codsiga Messenger-ka adigoon haysan akoon Facebook ah, kaliya lambarka taleefankaaga
Apple wuxuu sii daayaa iOS 9 Beta 2 iyo Watch OS 2 Beta 2
Galabnimadii ayaa qoob-ka-ciyaarka beta-ka dhacay, Apple-na waxay daabacday iOS 9 - Beta2, Watch OS 2 - Beta 2 iyo nooc kale oo ah OS X El Capitan.
WhatsApp iyo habka loo tahriibiyo xogtooda gaarka ah
Mar labaad ayay midabada ka saaraan WhatsApp marka la eego asturnaanta iyo ilaalinta xogta. Tani waa sida ay ugu ganacsadaan xogtayada ka socota WhatsApp Inc.
Taylor Swift kuma faraxsana Apple Music 3-da bilood ee bilaashka ah
Taylor Swift ma jecla fikradda ah inaan lacag laga qaadin durdurrada inta lagu jiro tijaabada bilaashka ah ee Apple Music ee saddexda bilood ah.
macruufka 9 kuu ogolaanaya inaad si loo badbaadiyo lifaaqyada email in iCloud
Apple oo leh iOS 9 waxay noo ogolaaneysaa inaan keydino lifaaqyada laga helo emayllada tooska ah ee kujira iCloud.
Yahoo ayaa hadda ku dhawaaqday inay joojinayso adeegsiga aaladaha macruufka ee gaboobay si ay u sii wado bixinta adeeg emayl ammaan ah sidii hore.
Qalabyada u Dhigma ee Ugu Horeeya ee HomeKit
Apple waxay cusbooneysiisay bogga ay ku muujineyso macluumaadka ku saabsan HomeKit oo ku daraya aaladaha ugu horreeya ee la jaan qaadi kara.
Sababaha ay Apple u joojinayso isticmaalka isku xiraha danabka ee iPhone iyo iPad si ay ugu sharaddo USB-C-ka cusub ee horay loogu heli jiray MacBook 2015.
Apple wax badan ayey ku bixin doontaa barnaamijkeeda dib-u-warshadaynta iPhone 4S / 5 / 5s
Ilaha laga helay Bakhaarka Apple Apple wuxuu xaqiijinayaa in Apple ay lacag badan ku bixin doonto barnaamijkeeda dib u warshadeynta haddii aan ka tagno iPhone 4S, iPhone 5 ama iPhone 5s.
Apple wuxuu sii daayaa Patch ku meelgaar ah oo loogu talagalay Arrinta iMessage
Apple waxay soo saartay dukumiinti taageero ah oo na siinaya balastar ku meel gaar ah dhibaatada ka hor istaageysa iMessage inuu furmo ka dib fariin ay heshay
WhatsMac, macmiil WhatsApp ah oo ka tirsan Mac-gaaga
Maanta waxaan kuu sheegi doonaa sida loo soo dejiyo macmiilka WhatsApp ee Mac-gaaga oo markaa aad ugu raaxeysan karto wada-hadalka WhatsApp ee aad ugu jeceshahay.
Playboy wuxuu bilaabay barnaamijkiisii ​​rasmiga ahaa ee aaladaha iOS
Maqaalka xiisaha leh ee aan ognahay in joornaalka 'Playboy magazine' uu horeyba u leeyahay codsigiisa oo loo heli karo aaladaha iOS.
Isku shaandheyn badan oo laba-shaashad ah iyo iPad Pro oo imanaya iOS 9
IOS 9 waxay la timid suurtagalnimada adeegsiga xisaabaadka isticmaale ee kala duwan si ay uga shaqeeyaan daaqado kala duwan oo leh shaqo badan.
iPhone 5C leh Aqoonsiga Taabashada iyo iPhone 6S bisha Ogosto
WWDC 15 way soo dhowaatay oo wararka xanta ayaa gubanaya. IPhone 5C leh Aqoonsiga Taabashada ayaa si dhuumaaleysi ah ku soo galaya websaydhka Apple iyo iPhone 6S ayaa la bilaabi karaa Ogosto.
Xasiloonida Doolarka Mareykanka awgeeda, Apple waxay kor u qaadeysaa qiimaha kumbuyuutaradiisa Canada iyo wadamada Yurub qaarkood (inta udhaxeysa 150 ilaa 600 euro)
Starbucks iyo Spotify waxay soo bandhigi doonaan isdhexgal udhaxeeya labada adeeg iyo abaalmarinta daacadnimada dhageysiga muusikada iyo cabbitaanka kafeega.
Greenpeace waxay ku amaaneysaa Apple siyaasadeeda cagaaran
Kuwii ku jiray Cupertino sidoo kale waa kuwa koowaad ee xeeladaha waara, Greenpeace waxay ku amaantaa Apple waxqabadkeeda cagaaran.
Google waxay go'aansatay inay joojiso taageerida YouTube-ka aaladaha qaarkood
Isbedelada API waxay ka dhigan yihiin in iphone-yada, ipod-yada, ipad-yada iyo ipad-ka Apple TV-ga ay saameyn ku yeelan doonto oo aysan mar dambe awood u yeelan doonin inay soo galaan fiidyowyada YouTube-ka.
The Super Mario clone wuxuu ku dhuftaa App Store sida Super Bros!
Kobciye Kostas Papadakis ayaa sii daayay qaabkiisa gaarka ah ee ciyaarta fiidiyowga ee caadiga ah Super Mario, oo ah jawi aad u adag oo Game Boy ah.
Apple wuxuu sii daayaa macruufka 8.4 beta 2 ee loogu talagalay horumariyeyaasha iyo beta 1 si guud.
Apple ayaa hadda sii deysay beta-kii labaad ee iOS 8.4, oo leh dhismo 12H4086d. Waxaan xasuusnaa in cibaada weyn ee macruufka 8.4 ay tahay ...
Xiisaha macruufka ee aadan aqoon: maxaa astaanta u ah qoraalada codku qarinaysaa?
Astaamaha codka macruufka macruufka ah ayaa qarinaya xiisaha xiisaha leh ee xiisaha aan la dareemin illaa iyo hadda.
Astaanta Android ayaa ka muuqata Khariidadaha Google oo ku kaadinaysa Apple
Astaanta Android waxay ka muuqataa Khariidadaha Google iyada oo laga diiirinayo astaanta Apple, oo ah sawir muran dhaliyay oo saameeya dadka isticmaala Android iyo iOS.
Haddii aad tahay DJ xirfadle ah ama aad si fudud ugu raaxeysato ujawaabidda ujawaabidda guddiga yar, djay 2 wuxuu noqday mid bilaash ah markii ugu horreysay ee iOS.
Rovio wuxuu ku dhawaaqay imaatinka Birds Birds Fight,, ciyaar dagaal cusub oo ay la socdaan shimbiraha yar yar ee caanka ah ee shirkadda sida astaamaha ugu waaweyn.
Ka dib markii la cusbooneysiiyo macruufka 8.3 waxaa jira isticmaaleyaal badan oo aan mar dambe isticmaali karin ikhtiyaarka ay ku iibsadaan Aqoonsiga Taabta. Cusbooneysiin ayaa dhowaan la filayaa.
Apple sidoo kale waxay cusbooneysiisaa Apple TV nooca 7.2
Apple TV sidoo kale waa la cusbooneysiiyay iyadoo la gaarsiinayo nooca 7.2 iyadoo la wanaajinayo xasilloonida iyo howlgalka.
IPhone-ka soo socda ayaa loogu yeeri doonaa iPhone 7
IPhone-ka soo socda, oo la filayo inuu yimaado bisha Sebtember, waxaa loogu yeeri karaa iPhone 7 halkii laga isticmaali lahaa iPhone 6s sababtoo ah wararka qalabka muhiimka ah
Ku abuur sheekooyin muuqaal qurux badan Adobe Slate
Adobe wuxuu bilaabay Adobe Slate, oo ah barnaamij cusub oo lagu abuurayo naqshado waaweyn, oo bilaash ah iPad-ka.
Yaab! Samsung Galaxy S6 Edge sidoo kale waa labanlaabmayaa [fiidiyow]
Fiidiyowgaan waxaan ku arki karnaa sida iska caabinta casriga cusub ee Samsung ay ula mid tahay tan iPhone 6, oo xitaa haysa wax yar.
Tani waa sida aan ugu ciyaari laheyn Super Mario 64 macruufka ah
Sawirada ciyaarta Super Mario 64 ee ku shaqeyneysa qalab iOS ah, gaar ahaan iPhone 6, ayaa la sifeeyey.
Tim Cook ayaa loo magacaabay hogaamiyaha ugu fiican adduunka
Majalada Fortune ayaa hada soo daabacday, sida ay sheegeen, in Tim Cook uu yahay hogaamiyaha ugu fiican aduunka dhanka ganacsiga.
Flightradar24 waxay kubilaabaneysaa App Store kadib shilkii naxdinta lahaa ee Germanwings
Barxadda Flightradar24 waxay bixisaa daba-gal diyaaradeed oo shaqsi ahaaneed
Pioneer wuxuu ku bilaabayaa qalab cusub CarPlay
Pioneer wuxuu bilaabayaa kormeerayaal cusub oo la jaan qaadaya CarPlay
Tim Cook: "Wax walba way is beddeli karaan marka laga reebo qiyamka"
Maamulaha Apple Tim Cook ayaa wareysi siiyay majaladda Fast Company. Dhexdeeda ayuu ku taabtay arrimo badan oo xilligan taagan.
Apple wuxuu bilaabaa inuu baabi'iyo antivirus-ka kujira App Store
Apple wuxuu ka tirtirayaa antivirus-ka App Store si looga hortago fursadaha laga helo barnaamijyada balan qaadaya in laga takhaluso furin ka timaadda iPhone ama iPad, wax aan macquul ahayn.
Dhagax dixeed si loo maalgaliyo $ XNUMX milyan oo qalab ah oo loogu talagalay Xilliga Xilliga Dhagaxa
Dhagax dixeed ayaa maalgelin doona lacagtiisa si ay u dhiirrigeliso soo saarista agabyada loogu talagalay Waqtiga Dhagaxleyda
Tani waa sida iPhone 6S uu u ekaan doono dhamaadka dahabka ubaxa
Fikradda ah waxa iPhone 6S u ekaan lahaa dhammaystiran oo casaan ah
Daabac xargaha Apple Watch
Waad ku mahadsan tahay daabacaadda 3D, waxaan awoodi doonnaa inaan u daabacno xargaha noo gaarka ah Apple Watch
HALKAN Khariidadaha, Nokia GPS-ka oo dambaskiisa ka soo kaca
Nokia waxay keentaa barnaamijkeeda GPS HALKII Khariidadaha ee iPhones
Dhibaatooyin kaa haysta Safari ka dib markaad cusbooneysiiso macruufka 8.2? Is daji, adigu kaligaa ma tihid
Safari waxay leedahay cilado ka dib cusbooneysiinteeda ilaa iOS 8.2
Cusbooneysiin cusub oo loogu talagalay Apple TV hadda waa la heli karaa
Apple waxay sii deyneysaa cusbooneysiinta barnaamijka Apple TV
Sida bil kasta, halkan waa fiidiyowga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dhismaha Apple Campus 2
Fiidiyow cusub ayaa na tusaya, jaleecada, sida dhismaha dhismahan weyn u socdo.
Cusbooneysiinta WhatsApp gaagaaban
Dhamaadka maanta waxaan isku aragnaa iyada oo aan ogeysiis hore la helin warbixin kooban oo cusub oo WhatsApp ah.
Microsoft waxay soo saareysaa kumbuyuutar isku-laabma oo la jaan qaadi kara macruufka
Microsoft waxay hadda soo saartay kumbuyuutar cusub oo isku laaban isla markaana la jaan qaadi kara qalab kasta oo leh Bluetooth 4.0
IKEA si loo iibiyo miisaska iyo laambadaha leh xeedho wireless ku rakiban
Qodobka aan ku ognahay warka sheegaya in IKEA ay iibin doonto miisaska iyo laambadaha leh xeedho wireless lagu rakibay.
IPhone ayaa ku qarxa jeebka isticmaalaha kaasoo sababa gubasho darajo saddexaad ah
IPhone ayaa ku qarxay jeebka surwaalka nin Long Island ah, taas oo keeneysa gubashada heerka labaad iyo saddexaad lugtiisa.
Spotify iyo Musixmatch: Spotify Karaoke
Spotify karaoke ayaa halkan inoo ah inaan ku heesno hees ka mid ah fannaaniinta aannu ugu jecel nahay Mac.
NetEase Cloud Music waa bedel cusub oo loo yaqaan 'Spotify'
Muusigga NetEase Cloud waa ka beddelka Spotify oo leh maktabad la yaab leh, oo maya, kama jabna Spotify, runtiina waa bilaash.
IOS 8.3 waxay emoji cusub ku soo kordhin doontaa aaladahayaga
IOS 8.3 waxay la imaan doonaan emojis cusub marka lagu daro suurtagalnimada wax ka beddelka midabka maqaarka ama tartanka mid kasta waqtiga qorista.
Fitbit Charge, Charge HR iyo silsiladaha curyaaminta mar kale waxay sababaan cuncun maqaarka ama xasaasiyadeed isticmaalayaasha qaar kadib dhowr saacadood oo la isticmaalo.
IPad-kan Air 2 ee socda Windows 98 ayaa kaa yaabi doona
IPad Air 2 ayaa la sii daayay iyadoo la adeegsanayo Windows 98, taas oo runtii ah talaabada ugu horeysa ee lagu socodsiinayo nidaamyada ka shaqeeya desktop-ka iPad-ka.
Wadayaasha Mareykanka waa inay sii daayaan iPhone-ka laga bilaabo maanta
Hawl wadeenada Mareykanka waxaa waajib ku ah inay sii daayaan iPhone-ka ama taleefan kasta oo kale marka qandaraaska ama lacag-bixinta taleefanka casriga ah la dhammeeyo.
IPhone wuxuu diiwaan galiyaa howlaheena si ka saxsan silsiladaha
Xidhmooyinka ama silsiladaha gacanta lagu xidho ayaa duubay hawl maalmeedkeena, hase yeeshee, iPhone 6 wuxuu awood u leeyahay helitaanka xog aad u tiro badan.
Apple wuxuu rukhsad u siinayaa toosh dibadda ah ee iPhone-ka
Apple waxay shatiyadeysaa banaanka LED-ka banaanka ee iPhone-ka, wax hagaajin doona sawirada la qaado habeenkii ama xaaladaha nalalka liita.
Codsiga Gandaaruhu wuxuu bilaabmayaa inuu hirgeliyo aaladaha lacag bixinta
Abuureyaasha Jaangooyuhu waxay adeegsadaan laba ikhtiyaar oo cusub oo ku kacaya $ 2,99 bishiiba
IPhone-ka ayaa noo ogolaanaya inaan furno gaariga, sida ku cad rukhsaddii ugu dambeysay ee Apple
Patent ayaa shaaca ka qaaday ujeedada Apple ee ah in ay adeegsato iphone furaha gaariga
Ku soo dejiso waraaqaha OS X Yosemite-kaaga iPad-kaaga
Haddii aad tahay taageere sawir-gacmeedka iyo in ka badan haddii ay ka socdaan Apple, halkan waxaa ah xiriiriyeyaasha soo dejinta ee waraaqaha OS X Yosemite
Google Earth Pro wuxuu noqonayaa mid bilaash ah
Google waxay ku bixineysaa nooca pro ee Google Earth lacag la'aan tan iyo usbuucii la soo dhaafay.
TouchID waa la siri karaa
Koox ka kooban 2 qof ayaa maareynaya inay ku nacaan Apple's TouchID sensor iyo iPhone 5s, 6 iyo 6 Plus kaliya 15 daqiiqo oo aan lacag badan ku bixin.
SoundCloud ayaa gabi ahaanba dib u naqshadeysa barnaamijkeeda iPad-ka
SoundCloud waxay soo saartay cusbooneysiin cusub oo ku saabsan codsigeeda, oo ay kujirto dib u habeyn dhameystiran oo ku saabsan barnaamijka iPad.
Racing Real 3 waxaa lagu cusbooneysiiyay gawaari iyo tijaabooyin cusub
Real Racing 3 ayaa lagu cusbooneysiiyay gawaari iyo heerar cusub si loogu dabaaldego bilowga ciyaarta laba sano ka hor.
Apple wuxuu 11 magaalo oo dheeri ah ku darayaa Flyover khariidadiisa
Apple waxay hagaajineysaa khariidadeeda iyada oo 11 magaalo oo cusub ku dareysa qaabka seddex-geesoodka ah ee loo yaqaan 'Flyover' kaasoo kuu oggolaanaya inaad sahamiso meelaha ugu waaweyn ee dalxiis.
Sannad-guuradii shanaad ee ipad ayaa timid!
Nagala soo qaybgal sannad-guurada shanaad ee ipad-ka safarka aan ku soo marayno taariikhdiisa, horumarkiisa, ku darsigiisa iyo ka-yarayntiisa
Uber si loo xadido kor u kaca qiimaha inta lagu guda jiro duufaanta taariikhiga ah ee New York
Uber ma adeegsan doonto kororka qiimaha caadiga ah kahor barafka ku soo dhowaada New York
Microsoft miyay koobiyeynaysaa Apple?
Waxaan eegeynaa dariiqa cusub ee Microsoft ay qaadayso tan iyo markii la soo saaray Windows 10 iyo waxyaabaha ay iska shabahaan shirkadda Apple.
Miyaad iska ilaalin kartaa khiyaanooyinka eBay ee ku saabsan noocyada noocyada Apple?
Dukaamada wax lagu iibsado iyo suuqyada internetka kuma adka inay ku dhacaan khayaanooyin. Ka dib iibinta nooc been abuur ah oo Apple ah, waxaan falanqeyneynaa inay suurtagal tahay in laga fogaado iyo in kale.
Isticmaalayaasha IPhone waxay ka dhammaadeen macmiilka websaydhka WhatsApp
Adeegsiga macmiilka websaydhka WhatsApp ee iPhone-ka ayaan macquul aheyn sabab la xiriirta xaddidaadda macruufka ee horumariyayaashu awoodi kari waayeen inay keydsadaan.
Riwaayadaha ugu waaweyn ee Windows 10
Microsoft waxay hadda soo bandhigtay Windows 10, oo leh warar muhiim ah iyo kuwa la mid ah Apple OS OS
Qalin, hadda lagu iibinayo dukaanka khadka tooska ah ee Apple
Qalinku waa qalin loogu tala galay iPad-ka oo ay soo saartay shirkadda FiftyThree, oo ah mulkiilaha dalabka Waraaqaha ee loogu talagalay naqshadeynta iyo sawir qaadista.
Ma isticmaashaa WhatsApp Plus? Markaas WhatsApp ayaa ku xannibi kara
WhatsApp ayaa xannibaya dadka isticmaala WhatsApp Plus ee moobaylkooda ku shaqeeya ee Android ama iPhone, taas oo ka hortageysa helitaanka macaamiisha fariimaha degdegga ah.
PlayBox wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku daawato filimada iyo silsiladaha qalabkaaga qalab la'aan
PlayBox waa codsi cusub oo loogu talagalay macruufka iyo Android kaas oo kuu oggolaanaya inaad daawato filimada qulqulka iyo silsiladaha oo aan lahayn Jailbreak.
Wax walboo aad ubaahantahay inaad ogaato kahor intaadan sameysan arji
Waxaan ku eegaynaa dhinaca kale ee codsiyada iyadoo la raacayo tilmaamahan wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato kahor intaadan dalab sameyn.
Facebook Messenger waxay hadda noo ogolaaneysaa inaan keydinno feylal badan oo fara badan oo naloogu soo diro.
TextBlade kumbuyuutarka gacanta lagu qaadan karo ee loogu talagalay iPhone iyo iPad
Textblade waa kumbuyuutar kumbuyuutar cusub oo la qaadan karo oo ujeedkiisu yahay inuu boos ka helo suuqa.
Cover Smart: daboolka hadda fura oo kaligiis xidha
Farsamooyinka cusub ee Smart Covers ayaa si otomaatig ah u furmaya una xirmaya waxaana laga arki karaa iyadoo lagu soo bandhigay daaqad ka mid ah dukaanada Apple ee ku yaal bartamaha London
Daawashada porn-ka ee iPhone-ka ayaa caan ku ah dadka isticmaala
Daawashada porn-ka ee iPhone-ka waa wax caadi ah in laga daawado fiidiyowyada websaydhada waaweyn ee qaawan ee bixiya waxyaabaha ay ka kooban yihiin ee ku habboon iPhone iyo iPad.
Soosaaraha Monument Valley wuxuu ka hadlayaa jabsiga macruufka iyo Android
Xogta burcad-badeednimada ee ku saabsan macruufka 'iOS' iyo 'Android' waxay muujineysaa in kaliya 40% laga bixiyay Monument Valley on iPhone oo kaliya 5% laga bixiyay Android
Wareysiga horumariyaha TaiG
Maalin dhaweyd waxay wareysteen XN, soosaaraha TaiG, wuxuuna kujawaabay hadalo kashifaya siro badan oo kusaabsan wixii aan ka fikirnay
Maxay ahaayeen barnaamijyada casriga ah ee casriga loo isticmaalo 2014?
Soo ogow codsiyada iOS iyo Android ee sida aadka ah loo isticmaalay 2014, sagaal ka mid ah waxaa abuuray Google ama Facebook.
MoneyWiz 2, maamul xisaabaadkaaga oo kor u qaad kaydintaada
Haddii wax badan oo la keydiyo ay ka mid tahay ujeeddooyinkaaga oo aad dooneysid inaad masuuliyad badan muujiso oo aad firfircoonaato markaad maareyneyso kharashyadaada, dalabkaaga, shaki la'aan, waa MoneyWiz 2
Maxaan ka filan karnaa Apple sanadka 2015?
Raadi waxa Apple ka cusub sanadka 2015 iyo waxa noqon doona badeecooyinka cusub ee la bilaabi doono sanadkan oo dhan.
Muxuu Apple u joojiyay bixinta 12 maalmood oo xoriyad ah?
Waxaa la xaqiijiyay in aysan jiri doonin 12 maalmood oo wax bixin ah sanadka 2014 kadib markii Apple ay joojisay inay ku soo bandhigto iTunes-ka.
Maxay Apple ama Beats uga mid yihiin noocyada doorbida ardayda kulleejada?
Waxaan falanqeyneynaa maxay yihiin furayaasha guusha noocyada waaweyn sida Apple ama Beats, kuwa ay doorbidaan dhalinyarada.
Pegatron si ay u baarto cabashooyinka laga keenay dukumintiga BBC
Documentary-ga BBC ee ku saabsan warshadaha wax keena ee Apple ayaa siinaya waxyaabo badan oo looga hadlo, hadda Pegatron wuxuu sheegay inuu kormeeri doono xarumaha.
Tani waa waxa dhacaya haddii aad ku karisid iPhone 6-gaaga Coca Cola
Isticmaalaha YouTube-ka ee TechRax ayaa IPhone 6 tijaabiyey tijaabo aad u qaas ah, kuna kariyey Coca Cola.
Apple waxay u mahadcelisay shaqaalaheeda sanadkan boorso
Sida sanad kasta, markay tani dhammaato, Apple waxay uga mahadcelisaa shaqaalaheeda shaqada si faahfaahsan loo qabtay, sannadkan waxay umuuqataa inay yihiin boorsooyin shaqsiyeed.
Qalabka magnetka ayaa khalkhal gelin kara iPhones-ka cusub
Isticmaalayaasha waxay ogaadeen dhibaatooyinka kaamerada iPhone 6 Plus iyo NFC ee iPhone 6 iyo 6 Plus, sababta waxay noqon kartaa faragalin ka timid qalabka magnetka
Kuwani waa tijaabooyinka ay tahay in Gorilla Glass ay ka gudubto [muuqaal]
Waxaan kuugu soo bandhigeynaa fiidiyowga tijaabooyinka Muraayadda Gorilla ee ay tahay in iPhones-ka cusub ay ka gudbaan si ay u muujiyaan tayadooda.
Liisankaaga wadista ee mobilkaaga
Gobolka Iowa ayaa isu diyaarinaya soo saarista liisanka darawalnimada dijitaalka ah. Gobolku wuxuu rabaa inuu ku helo mobilka, kaas oo la noolaan doona midka hadda jira.
Booliiska Kanadiya ayaa hada baari kara mobilkaaga amar la'aan
Asturnaanta waxay noqotay mowduuc tab ah adduunka casriga ah. Hadda sharci cusub ayaa u oggolaanaya booliiska Kanada inay baaraan taleefankaaga gacanta amar la'aan.
Apple wuxuu bilaabay codsiyada ganacsi ee ugu horeeya IBM
Apple maanta waxay bilaabeen codsiyo ganacsi IBM, oo loo yaqaan MobileFirst ee iOS, Apple waxay rajeyneysaa inay siiso adeegyo kala duwan shirkadaha.
Iska yaree Xarka Om Nom wuxuu noqdaa xayawaan xayawaan ah
Om Nom, oo ah xiddigga loo yaqaan 'Cut The Rope', ayaa ka soo muuqan doona ciyaar xayawaan ah oo cusub oo bilaabmi doona Khamiista soo socota. Dhexdeeda, wuxuu ku yeelan doonaa wehel cusub ...
ICaughtU Pro tweak wuxuu ka caawiyaa soo qabashada tuug iPhone
JAILBREAK waa wax Apple ay ka dhigeyso waji aad u xanaaq badan, laakiin markan waxaa mahad iska leh tweak, iCaughtU Pro, waxay awoodeen inay helaan tuugga iPhone.
Bill fernandez, shaqaalihii ugu horreeyay ee Apple wuxuu ka hadlayaa Shaqooyinka
Bill Fernandez, oo ah shaqaalihii ugu horreeyay ee Apple, ayaa bixiyay wareysi uu kaga hadlayo bilowga shirkadda iyo xiriirka uu la leeyahay Steve Jobs.
Hel saddex bilood Spotify Premium oo ah 0.99 yuuro
Haddii aad qabatimayso Spotify, imaatinka Kirismaska ​​adeegani wuxuu ku siinayaa suurtagalnimada helitaanka saddex bilood oo Premium ah oo keliya 0.99 euro
Spotify waxay ku siineysaa 3 bilood oo ah xisaabta Premium ee ah 0,99 euro
Spotify Premium hada qiimahiisu waa 0,99 euro mudo sadex bilood ah si aad u dhagaysan karto dhamaan muusikada aad rabto ficil ahaan bilaash iyo xayeysiin la'aan.
Steve Wozniak wuxuu adeegsadaa iPhone 6 si uu ugu galo qolkiisa hoteelka
Woz waxay muujisay in barnaamijka SPG, ee ay sameeyeen Starwood Hotels, uu kuu ogolaanayo inaad si macquul ah u furto qolkaaga huteelka adoo isticmaalaya iPhone 6.
Cyber ​​Monday, dalabyo badan oo loogu talagalay alaabooyinka Apple iyo iPhone
Cyber ​​Monday 2014 waxay wax ka iibsaneysaa alaabada iyo alaabada Apple ee iPhone, iPad ama Mac. Iibso qiimo jaban iibkan cajiibka ah.
Emulator-ka PSP ee iOS, PPSSPP, waa la cusbooneysiiyay
Emulator-ka loo yaqaan inuusan ku xirneyn JAILBREAK ayaa la cusbooneysiiyay si toos ah loogu rakibo qalab kasta oo la jaan qaada.
Ivo Leko wuxuu muujinayaa hab cusub oo lagula falgalo iPhone-ka
Ivo Leko waa horumariye IOS, fiidiyowgan wuxuu nagu tusayaa hab cusub oo lagula falgalo iPhone-ka.
Waad ku mahadsan tahay websaydhka IPSW waxaan hubin karnaa firmware-ka ay Apple saxeexayso wakhti kasta.
Chip-ka A8 wuxuu 4K ku ciyaaraa iPhone 6 iyo iPhone 6 Plus
Soosaarayaasha WALTR waxay ogaadeen in codsigoodu awood u leeyahay inuu ku ciyaaro 4K videos on iPhone 6, waxaana sabab u ah processor-ka A8 oo uu ku daro.
Microsoft waxay ku jeesjeesaysaa Apple iyagoo adeegsanaya Siri iyo Cortana
Xayeysiinta isbarbardhiga ah ayaa mar kale ku dhufta. Xaaladdan oo kale, waa Cortana cidda Siri ku weerareysa "cilladaha" ay iPhone ka qabto Microsoft.
Tusaha IFixt ee Dayactirka iPhone 6 iyo iPhone 6 Plus
Tilmaamaha iFixt ayaa lagu daabacay halka ay ku sharxayaan talaabo talaabo ah sida loo hagaajiyo qalabkaaga iPhone 6 ama iPhone 6 Plus naftaada, iyada oo loo marayo sawirro iyo fiidiyowyo.
Danalock wuxuu kuu ogolaanayaa inaad albaabka guriga ku furto iPhone
Tani waa sida qufulka elektaroonigga ah ee smart 'Danalock' uu u shaqeeyo
Gorilla Glass 4 wuxuu balan qaadayaa inuu iska caabinayo dhicitaanka maalinba maalinta ka dambeysa wuxuuna nagu tusayaa muuqaal ahaan
Fiidiyowga iska caabinta Gorilla Glass 4, muraayadda cusub ee shaashadaha mobilada iyo kaniiniga oo ballan-qaadaya inay iska caabbinayaan hoos u dhac la'aan.
Apple wuxuu ku darayaa heerkulka Ecobee3 dukaankiisa internetka
Liiska dheer ee aaladaha Guriga ee kuxiran ee Apple dhowaan soo kordhisay heerkulbeeg cusub oo casri ah, Ecobee3, aan aragno waxa ay keeneyso.
10 waxyaabood oo aadan ka aqoon Tim Cook (oo aad jeceshahay inaad ogaato)
Maamulaha guud ee Apple hadda waxbadan kama wadaagaan Steve Jobs. Maanta waxaan ogaaney qaar ka mid ah siraha qarsoon ee laga ogyahay masuulka weyn ee dhismaha.
Kordhi keydkaaga iPad-ka SanDisk iXpand
SanDisk ayaa hada soo saartay qalab cusub oo noo ogolaanaya inaan balaarino keydinta Ipad-kayga
Isticmaaluhu wuxuu maareeyaa inuu ku rakibo Windows 98 Iphone 6 Plus
Qofka adeegsada madal Shiinuhu leeyahay ayaa ku guulaystay inuu Windows 98 ku rakibo iPhone 6 Plus, sida uu sheegayo, waxay ahayd geedi socod uu samir badan ku yeeshay.
Hubi haddii qalabkaaga macruufka uu ku dhacay WireLurker
Dhowr maalmood ka hor ayaa la shaaciyey in furin ku dhacday aalado cudurka qaba, habkan waxaad ku hubin kartaa in qalabkaaga iOS uu cudurku ku dhacay.
Apple waxay ku shaqeyn laheyd iPhone mustaqbalka leh 3D oo aan laheyn muraayadaha indhaha
Sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay UDN, Apple waxay ku shaqeyn doontaa shaashad leh teknolojiyad 3D ah oo aan lahayn muraayado, kaas oo loo malaynayo in lagu dhejin doono iPhone mustaqbalka.
Koox ka kooban 6GB iphone 128 isticmaaleyaal ah ayaa la kulma arrimo ku saabsan qalabka qalabka
6GB iPhones 6 iyo iPhone 128 Plus waxaa laga yaabaa inay dhibaato ku noqoto qalabka qalabka
Taallo loogu talagalay Steve Jobs ayaa laga saaray maxaa yeelay Tim Cook waa qaniis
Masuuliyiinta Ruushku waxay meesha ka saareen taallo loogu talo galay Steve Jobs, bayaankii uu sameeyey Tim Cook, oo ah agaasimaha guud ee hadda ee Apple, kuna saabsan nooca galmada.
Pangu waxay cusbooneysiin doontaa xirmada "Untether" ilaa 0.4
Kooxda gacanta ku haysa soo saarista Pangu8 waxay xaqiijisay sii deynta nooca 0.4 ee xirmada "untether" ee xalin doonta dhibaatooyinka Safari
Apple ayaa xallin lahaa "Bendgate" caanka ah
Markii la bilaabay aaladaha cusub ee Apple, murankii caanka ahaa ee loo yaqaan "Bendgate" ayaa soo ifbaxay, waxay u muuqataa in Apple ay xallin karto.
Waxaan hadda ka rakibi karnaa Cydia barnaamijka Pangu (Jailbreak)
Pangu horeyba waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku rakibto nooca 'Cydia' oo la jaan qaadaya iOS 8 barnaamijkii lagu rakibay markii aan JAILBIL
Cilad ku dhacday iPhone 6 Plus ayaa keeneysa in dib loo bilaabo
Muran cusub ayaa soo gaadhay iPhone 6, kiiskan wuxuu diiradda saarayaa iPhone 6 Plus, kaas oo sabab aan la garanayn uu sababayo qalad weyn.
U rogo iPhone aaladda kontoroolka fog
21-kii Oktoobar, waxaa lasii daayay rukhsad Apple ah, taas oo laga dheehan karo sida ay suuragal u tahay Iphone-ka inuu horumarin ku sameeyo howlaha gawaarida.
Shaashadda IPad Air 2 waxay sababi kartaa dhibaatooyin
Shaashadda anti-milicsiga ee iPad Air 2 waxay sababi kartaa dhibaatooyin soo saar iyo keydku wuu xaddidnaan lahaa
iPad Air 2 iyo iPad Mini 3, halyeeyada muhiimka ah: si faahfaahsan
IPads ayaa halyeeyo ka ahaa hal-abuurka Apple tan iyo markii la soo bandhigay Air 2 iyo Mini 3, kee baad diyaar u tahay inaad iibsato?
Dukaamada Apple ayaa dhawaan laga yaabaa inay bixiyaan adeeg loogu talagalay alaabada Beats
Apple waxay adeeg u fidin kartaa dhagaha dhagaha ee 'Beats headphones' iyo kuwa ku hadla dukaamada Apple.
Apple wuxuu si toos ah u tabin doonaa dhacdada Oktoobar 16
Apple waxay si toos ah u tabin doontaa dhacdada iPad Air 2 iyo iPad Mini 3 si ay si faahfaahsan u ogaato dhammaan wararka muhiimka u ah Oktoobar 16.
Sida loo rakibo Waqtiga saanbareenka isagoon lahayn JAILBIL
Waxay heleen xalka si loogu rakibo Popcorn Time aaladaha bilaa JAILBIL iyadoo la adeegsanayo nuglaansho ay sidoo kale isticmaalaan emulators
Moviebox, oo ah barnaamij la mid ah Waqtiga PopCorn laakiin aan u baahnayn JAILBREAK
Thanksbox Moviebox waxaan ku raaxeysan karnaa qulqulka filimada iyo taxanaha aaladdayada, laakiin muhiim maahan in xabsi laga helo
Pioneer wuxuu bilaabaa iibinta qalabka ku habboon CarPlay iyo Spotify waxay u qortaa sidii barnaamij la jaan qaadi kara
Pioneer wuxuu cusbooneysiiyaa dhowr nooc oo raadiyayaasheeda ah si ay uga dhigaan kuwo la jaan qaadaya CarPlay, teknoolojiyadda Apple ee macruufka ku dareysa gaariga.
Apple wuxuu sii daayaa macruufka 8.0.2 (oo hadda wuu shaqeeyaa)
Hadda waa la heli karaa, iyada oo loo marayo OTA, iOS 8.0.2 si aad u soo dejiso
Top 25 macruufka 8 Features (II)
Qeybtan labaad ee boostada waxaan ku falanqeyneynaa inta ka hartay shaqooyinka ugu wanaagsan ee iOS 8, nidaamka cusub ee hawlgalka ee tufaaxa weyn ee qalabkaaga iDevices
AT&T waxay bilaabeysaa dalabyo xiiso leh si aad uga dhigto iibsashada iPhone 6-kaaga mid ka raqiisan
Qorshaha dalabyada ee hawlwadeenka AT & T si aad uga dhigto iibsashada iPhone 6 mid aad u jaban
Khidmadaha ay Apple ka qaadi doonto Apple Pay
Nidaamka cusub ee lacag bixinta ee Apple wuxuu ballan-qaadayaa inuu yahay ganacsi faa'iido badan u leh shirkadda. Maanta waxaan falanqeyneynaa guddiyada aad ka qaadi doontid isticmaalkooda.
Udejiso Heesaha U2 ee Dambi La'aanta album for free
Sida loo soo dejisto albumka Songs of Innocence by U2 si bilaash ah, albumkii ugu dambeeyay ee kooxda oo laga heli karo bilaash iTunes.
Qalabka A8 waxaa weheliya mashiinka cusub ee M8 kaas oo ay ku jiraan keydinta masaafada safarka iyo barometerka.
Ka duulaya xerada cusub ee Apple
Diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ah ee loo yaqaan 'drone-ka' ayaa dul martay waxa noqon doona kambaska xiga ee Apple, oo loo qorsheeyay in lagu dhammaystiro sanadka 2016.
Imtixaanka iska caabinta ee u dhexeeya galaas safayr iyo Gorilla Glass
Ragga uBreakiFix waxay sameeyeen tijaabo iska caabin ah inta udhaxeysa dhalo safayr iyo Gorilla Glass. Waxaan ku tusinaa kan adkaysiga badan.
Silver waxay kuu oggolaaneysaa inaad isticmaasho Swift si aad ugu horumariso barnaamijyada ku saabsan Android iyo Windows Phone
Soo bandhigida luqadda ee barnaamijyada ku jira macruufka 'iOS' waxay bixisaa dhinacyo saddexaad. Lacag ayaa timid oo kuu oggolaaneysa inaad isticmaasho Swift si aad ugu horumariso barnaamijyada ku saabsan Android iyo Windows Phone.
Sapphire vs Gorilla Glass: fiidiyowyo isbarbar dhiga labada
In kasta oo macluumaadka is burinaya ee ku saabsan adkaanta labada qalab ay ku socdaan shabakadda, maanta waxaan aragnaa safayr iyo Gorilla Glass fool ka fool.
Qiimaha T-Mobile wuxuu yareeyaa iPhone 5s iyo iPhone 5c
T-mobile-ka Mareykanka wuxuu bixiyaa qiimo jaban iPhone 5s iyo iPhone 5c
Waxaan ku bari doonaa inaad dhaqaajiso Badhanka Badhanka ee iOS 7 si aad u xakameyso macruufka adoo riixaya shaashadda
Sida loo beddelo lambarka sirta ah ee iPad-kaaga jailbroken
Waxaan ku baraynaa sida loo beddelo lambarka sirta ah ee isticmaalaha (root) lambarkaaga iPad-ka ee jeellan iyada oo loo marayo boosteejada moobiilka ee aan ku rakibno Cydia